Deni “Doorashada ka hor waa in laga hadlaa, sida ciidamada loo maamulaayo” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Deni “Doorashada ka hor waa in laga hadlaa, sida ciidamada loo maamulaayo”
Deni “Doorashada ka hor waa in laga hadlaa, sida ciidamada loo maamulaayo”
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in khilaafka ka taagan doorashada ka hor loo baahan yahay in laga hadlo arrinta ciidamada, oo sida uu sheegay in ay si gaar ah u isticmaalayaan Madaxda Dowladda Federaalka.
Madaxweynaha Puntland ayaa Madaxda Dowladda Federaalka ku eedeeyay inay xalay ciidamo dheeraad ah soo dhoobeen aagga uu ku yaalo Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde, oo iyagu ay degan yihiin.
“Shirka berri furmaya illaa iyo hadda anaga wax rasmi ah oo aan ognahay oo kaga qaybgaleyno ma jirto.” Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland oo la hadlay BBC.
Madaxweynaha ayaa yiri “Maxaaba shir laga qaybgalaa meeshii aan maleyneynay inay aamin tahay oo AMISOM tiri ammaankeeda anagaa sugeyno oo UN-ka uu noogu yeeray ayaa nalagu soo weeraray oo xalay afarta dhinac ciidamo laga dhigay. Ciidamadaa runtii waxaan u fasiranay inay lamid yihiin kuwii 19-kii February weeraray Hotel Maa’ida iyo agagaarka Airport-ka dadkii ku mudaaharaadaayay.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Dalku wuxuu ku jiraa marxalad adag oo ciidameysan oo meel walba ciidan la gaynayo. Waxaan rabaa inaan caalamka iyo bulshada Soomaaliyeedba u cadeeyo inuu dalka khatar ku jiro, oo uu u baahan yahay samata-bixin, loona baahan yahay in loo istaago, waayo Madaxweynaha xilkiisa dhammaaday waxaad mooddaa in caqligii militariga waaguu wadanka ka talinayay ku jiray inuu hadda ku dhaqmaayo.”
Madaxweynaha ayaa yiri “Haddii dad gaar ah ay ciidamadu yeeshaan, haddee dalku waa wada ciidameysan yahay, dadkuna waa wada hubeysan yahay, khatar amni baana ka dhici doonta. Marka waxaan ka digayaa in Ciidamada Qaranka arrimo siyaasadeed oo gaara ah loo isticmaalo, arrintaas khatar weyn baa ka muuqata.”
Madaxweyne Deni ayaa intaa ku daray “Shirba meesha kama muuqdo, waxaa ka horeyso horta amniga iyo sida Ciidamada Somaliya loo maamulaayo in meel leesla dhigo, sharciyada dowladda meel leesla dhigo, markaasaa doorasho laga hadli karaa, xilli hadda doorasho laga hadlo lama jooggo, 19-kii February wixii dalka ka dhacay waa middii dhashay Madasha Badbaado Qaran. Anagu halkaasuu khadkayagu yahay in dalkan aan badbaadino, awalna waan u joognay, haddana waan u sii jooggi doonnaa.”
Previous articleBeesha Caalamka oo ka hadashay shirka lagu wado in lagu qabto Afisyooni
Next articleTaliska Booliska oo ka hadlay ciidamada la sheegay in la geeyay Garoonka Aadan Cadde